कम्युनिस्ट मक्कामदिना- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
चीन भ्रमणमा आएका प्राय: नेपालीको इच्छा पनि माओको शव हेर्ने हुन्छ । उनीहरूका लागि ग्रेटवालभन्दा पनि माओको शवको अवलोकन गर्नु प्राथमिकतामा पर्छ ।
पुस ७, २०७५ चेतनाथ आचार्य
काठमाडौँ — डिसेम्बर २६ (आगामी बुधबार) माओत्सेतुङको १२५ औँ जन्म जयन्ती हो । आधुनिक चीनका संस्थापक नेता माओलाई चीनमा मात्र होइन, संसारभरका कम्युनिस्टले श्रद्धा र आस्थाले हेर्छन् । सन् १८९३ डिसेम्बर २६ मा जन्मिएका माओको मृत्यु सन् १९७६ सेप्टेम्बर ९ मा भएको हो ।
माओको मृत्यु भएको ४२ वर्ष भइसके पनि उनको शवलाई बेइजिङको केन्द्र भाग थियानआनमन क्षेत्रको दक्षिणपट्टि रहेको माओ स्मारक भवनमा संरक्षण गरेर राखिएको छ । माओ स्मारक भवन सोमबारबाहेक हरेक दिन बिहान ८ देखि १२ बजेसम्म खुल्छ । जुलाई र अगस्त महिनामा भने बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म खुल्ने गर्छ । माओको जन्मदिन डिसेम्बर २६ र मृत्यु भएको दिन सेप्टेम्बर ९ मा चाहिँ बिहानबाहेक दिउँसो २ देखि ४ बजेसम्म पनि भवन खुल्ने गर्छ ।
माओको मृत्यु हुँदा चीनभरि जति लोकप्रिय थिए, त्यत्तिकै दरमा चीनभरिको प्रतिनिधित्व हुने गरी यो भवन बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट नमुना सामग्री प्रयोग गरिएको छ । माओको मृत्यु भएको अढाइ महिनापछि १९७६ नोभेम्बर २४ मा निर्माण सुरु भएको यो भवन १९७७ मे २४ मा पूरा भएको थियो । यसको निर्माणमा चीनका विभिन्न प्रान्तका सात लाख नागरिकले सांकेतिक स्वयंसेवा गरेका थिए । स्मारक भवनमा चीनका विभिन्न प्रान्तका फरक–फरक वस्तु प्रयोग भएका छन् । सिचुवान प्रान्तको ग्रेनाइट, क्वाङतोङको पोर्सिलियन माटो, पल्लो सान्सीका सल्लाको काठ, सिन्चियाङको विशेष प्रकारको वनस्पतिको बीउ, थाङसानको माटो, नान्चिङको रङ, खुनलुन पहाडको सेतो पत्थर, च्याङ्सी प्रान्तको पाइन लग, ताइवानको पानी र बालुवा यसमा मिसाइएको छ । नेपाल र चीनको सीमामा रहेर चुचुरोचाहिँ नेपाली भूभागमा पर्ने विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट ल्याइएको ढुंगा पनि यो भवनमा प्रयोग गरिएको छ । ५७.२ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा रहेको माओ स्मारक भवनको मुख्य प्रवेशद्वारको माथिपट्टि सुनौला अक्षरमा लेखिएको छ— अध्यक्ष माओ स्मारक हल ।
भवनको उत्तरतिर प्रवेशद्वार छ भने दक्षिणतिर निकासद्वार रहेको छ । भवनमा पस्नासाथ मार्बलबाट बनेको साढे तीन मिटर अग्लो माओको सालिक भेटिन्छ । मध्यभागको हलमा क्रिस्टलभित्र माओको शव छ । छातीसम्म चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डाले ढाकिएको शव कालो ग्रेनाइटको कफिनमा राखिएको छ । कफिनको चारैतिर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको चिह्न, चीनको राष्ट्रिय चिह्न, चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको चिह्न र माओको जन्म र निधनको मिति लेखिएको छ । स्मारक भवनको दोस्रो तलामा माओ चतुङसँगै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लोकप्रिय नेताहरू चाउ एन लाई, लिउ साओ ची, चु त, तङ स्याओ फिङ र छनयुनको नाममा स्मृति कोठा छन् ।
माओ स्मृति हलमा प्रवेश नि:शुल्क छ । हलभित्र पस्दा टोपी लगाउन पाइन्न । साथमा कुनै झोला, खाद्यसामग्री र क्यामेरा बोक्न निषेध छ । एकआपसमा बोल्न पनि पाइँदैन । चीन सरकारको आमन्त्रणमा आएका विदेशी उच्च पाहुनालाई भने विशेष सुविधा उपलब्ध हुन्छ । त्यस्ता पाहुनालाई भवनभित्र केही समय बस्ने र भवनको माथिल्लो तला अवलोकन गर्ने अवसर हुन्छ । ती पाहुनाले भवनभित्र माओको सालिकलाई पृष्ठभूमिमा पारेर फोटो खिच्न पाउँछन् तर माओको शवको फोटो खिच्नचाहिँ पाउँदैनन् ।
चीन भ्रमणमा आएका प्राय: नेपालीको इच्छा पनि माओको शव हेर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी समर्पित नेता तथा कार्यकर्ता चीन आएका छन् भने त उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता नै माओको शव हेर्ने हुन्छ । उनीहरूका लागि ग्रेटवालभन्दा पनि माओको शवको अवलोकन गर्नु प्राथमिकतामा पर्छ ।
सन् २०१७ को मार्चमा चीन भ्रमणमा आएका दाङ देउखुरीका तुलसीराम अधिकारीको सबैभन्दा ठूलो इच्छा माओको शव हेर्ने थियो । उनी लामो समय तत्कालीन माओवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेर २०५७ सालदेखि तत्कालीन एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । शिक्षण पेसासँगै कम्युनिस्ट विचारलाई आफ्नो आदर्श बनाएका अधिकारी चीन भ्रमणमा आउँदा माओ स्मारक भवन मर्मत–सम्भार भइरहेकाले ९ महिनाका लागि बन्द गरिएको थियो । माओको शव हेर्न नपाईकन फर्कनुपर्दा अधिकारीले थकथकाउँदै भने, ‘माओका कोटेसन र रातो किताब घोकेर जिन्दगीको आधा उमेर बिताइयो तर माओकै भूमिमा आएर पनि उनको शव हेर्न पाइएन ।’
चीन आएर माओको शव हेर्न नपाएकाले पछुताउने अर्का व्यक्ति पत्रकार महासंघ रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष मानसिंह विश्वकर्मा पनि हुन् । उनी गत अगस्टमा चीन भ्रमणमा आएका थिए । ‘आफू त माओको नाममा जनयुद्ध लडेर आएको,’ सुरुमा उनी भन्दै थिए, ‘माओकै इतिहास पढेर हामीले लङमार्च पनि गरेका थियौँ ।’ तर, दुर्भाग्य उनी बेइजिङ आइपुग्दा चीन–अफ्रिका मञ्च सुरु भएकाले सुरक्षार्थ माओ स्मारक भवन बन्द गरिएको थियो । उनले भवनको अगाडि गएर फोटो खिच्नै पाएनन् । बरु ग्रेटवाल प्रवेश गर्ने स्थानमा ठडयाइएको माओको शालिक अगाडि मुठी उचालेर फोटो खिचे र चित्त बुझाए ।
नेपालमा कम्युनिस्ट विचार राख्नेका लागि माओको शव हेर्ने कुराले कति महत्त्व राख्छ भन्ने कुराको अर्को एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ । सन् २०१८ को मे महिनामा नेपालबाट लोकनाथ सुवेदी र धरणीप्रसाद गौतम सपरिवार चीन भ्रमणमा आएका थिए । उनीहरूले माओ शवको अवलोकन गरे । बाहिर निस्किएर माओ स्मारक भवनलाई पृष्ठभूमिमा पारेर फोटो खिचे अनि त्यही साँझ ‘आज माओको शव हेरियो’ लेख्दै फेसबुकमा राखे । त्यसमा प्रतिक्रिया दिनेहरूले लेखे, ‘मक्कामदिना पनि पुगिएछ, अब मोक्ष पाइयो हैन त !’ प्रकाशित : पुस ७, २०७५ ०९:१८
मलाई लाग्छ, क्यान्सर मेरो जीवनमा एउटा उपहारको रूपमा आयो । मेरा हेराइ तीक्ष्ण भए, मेरा सोच सफा भए, मेरो दृष्टिकोण पुनर्जागृत भए । मैले मेरा आक्रोश र तनावहरूलाई शान्त भावमा परिवर्तन गर्न सफल भएँ । तर, याद राख्नुस्, म अझै पनि मानिस नै हुँ !
पुस ७, २०७५ मनीषा कोइराला
काठमाडौँ — मलाई लाग्छ, क्यान्सर मेरो जीवनमा एउटा उपहारको रूपमा आयो । मेरा हेराइ तीक्ष्ण भए, मेरा सोच सफा भए, मेरो दृष्टिकोण पुनर्जागृत भए । मैले मेरा आक्रोश र तनावहरूलाई शान्त भावमा परिवर्तन गर्न सफल भएँ ।
महिनौंको अथक प्रयासपछि आत्माभित्र निर्माण गरेको बगैंचाले नयाँ साथीसँग परिचित गराइदिएको छ— मनीषा । यो उत्साही, बाठो, आत्मविश्वासी र उज्ज्वल नयाँ व्यक्ति मेरो छेउमा राखेर म विश्वसँग साक्षात्कार गर्न तयार भएकी छु । जीवनले मेरा अगाडि राख्ने नयाँ चुनौतीहरूका लागि म तयार छु । मैले चुनौतीहरूको सामना गर्न नयाँ सीपहरू विकास गरिसकें ।
‘नयाँ म’ ले म भित्र ‘महिला कोइराला’ लाई जन्म दिएको छ । यो पात्र मैले अभिनय गर्दा मभित्रै थियो । मलाई ‘१९४२ : ए लभ स्टोरी’ का लागि स्क्रिन टेस्ट दिँदाको समय सम्झना छ । वरिष्ठ फिल्म निर्माता विदुविनोद चोपडाले मलाई एउटा सिन गर्न बोलाउनुभएको थियो । तर, अन्तिममा उहाँले दिनुभएको प्रतिक्रियाले म हतोत्साहित भएकी थिएँ, ‘मनीषा, तिमी खत्तम रहिछौ । तिमी एकदमै खराब अभिनेत्री रहिछौ ।’
मेरा लागि त्यो स्वीकार्य थिएन । मभित्रको लडाकु महिलामाथि यो चुनौती थियो । मैले उनीसँग दोस्रो अवसर र तयारी गर्न २४ घण्टाको समय मागें । घर फर्किएपछि, मैले आफ्ना लाइनमा पूर्ण रूपमा डुबेर बोल्ने अभ्यास गरें, घरी–घरी त्यही दोहोर्‍याइरहँदा मेरी आमा मेरो अवस्था देखेर तनावमा आउनुभयो ।
‘के गरेको यो आफूले आफूलाई ? यो फिल्म तिमीले नपाए पनि केही छैन । यसका लागि आफूलाई नमार ।’
अर्को दिनको प्रदर्शनमा मैले आफ्नो आत्मा नै छताछुल्ल बनाइदिएँ । विदु धेरै बेर एकोहोरिएर चुपचाप बसे । केही समयपछि उनले भनेका शब्दले मेरा आँखाबाट आँसु झरे, ‘यदि तिमीले हरेक सिनमा यसैगरी आफ्नो मन र आत्मा दिने वाचा गर्छौ भने म माधुरी दीक्षितको स्थानमा तिमीलाई यो फिल्ममा लिन्छु । मनीषा, हिजो तिमी शून्य थियौ । आज सय छौ ।’
यसरी म १९४२ मा अनुबन्धित भएकी थिएँ । यो फिल्म बक्स अफिसमा हिट भयो र समीक्षकहरूले मभित्र प्रतिभाको खानी नै रहेको भनेर प्रशंसा गरे ।
नयाँ अविष्कार, नवीन र पुनर्जागृत भएर मैले मेरा लागि अब नयाँ सीमा तोकेकी छु । मेरो निरन्तरको संघर्ष भनेको मभित्रको कठोरतालाई तोड्नु तर कमजोर नहुनु हो ।
के मलाई अब पनि प्रेमी चाहिन्छ ? अवश्य चाहिन्छ !
तर, अब म कसैलाई पनि मेरो पावन क्षेत्रमा प्रवेश दिँदा उसको बृहत् परीक्षा लिन्छु । म पुन: मेरो हृदयलाई चोट दिन चाहन्नँ । त्यसो भए मैले के खोजिरहेकी छु त ?
जो मेरो समानान्तर छ, मलाई बुझ्छ र मेरा जीवन भोगाइलाई आदर गर्छ । यस्तो साथी जसले आफ्नो समस्याहरूको समाधान गरेको छ वा गर्ने प्रक्रियामा छ । जसले मलाई मेरा समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग गर्छ र मलाई पनि आफ्नो समस्या समाधान गर्नका लागि स्थान दिन्छ । केही शब्दमा भन्नुपर्दा, परिपक्व, आध्यात्मिक, आर्थिक रूपमा स्थिर, आफ्नो काममा पूर्ण र सुन्दर । के मेरो यो माग धेरै हो ? हुन सक्छ । के मैले यस्तो व्यक्ति पाउँछु ? थाहा छैन । के यसमा म केही सम्झौता गर्न सक्छु ? सक्दिनँ ।
त्यस्तो व्यक्तिसँग भेट नहुँदासम्म आफ्नो खोलभित्र रमाउने ओएस्टरजस्तै म आफैंसँग आत्मनिहित, पूर्ण र खुसी रहन्छु ।
त्यसो भए के क्यान्सरले ममा परिवर्तन ल्याएको हो ? हो ।
बर्खाको पानीले हिजोको फोहर बगाएझैं, मेरो नयाँ बिहानीमा मैले आफूलाई सम्पूर्ण नचहिँदा बन्धनहरूबाट मुक्त गरें । डिजाइनरले डिजाइन गरेका कपडा र ब्यागहरू मेरा लागि अब मात्रै वस्तु हुन्, नशा होइनन् । सम्बन्धहरू अति मूल्यवान छन्, केवल समय कटाउने मेलो होइनन् । मैले गर्ने नाटक अब केवल पर्दामा मात्रै सीमित छ । मेरो भावनात्मक जीवनलाई विशुद्ध बनाएका नकारात्मक भाव, विषाक्त व्यक्ति, परिस्थिति र सम्बन्धबाट टाढिन मैले धेरै पीडा सहें । अब ती नकारात्मकताको स्थान स्वस्थ र पोषणयुक्त खाना, व्यायाम, योग र प्राणायामले लिएको छ । मैले पुन: फिल्महरूमा काम गर्न पनि थालेकी छु । मलाई जीवनले दिएको र दिने अवसरप्रति निकै अनुगृहीत छु ।
म पहिला एउटा हावाको झोंकामा नै भाँचिन सक्ने कमजोर रूख थिएँ भने अब म गहिरो जरा भएको बरको रूखमा परिणत भएकी छु । मेरा हाँगाहरू, मेरा जीवनका सबै पाटालाई दर्साउँदै विभिन्न दिशामा फैलिएका छन् ।
प्रेरक वक्ताका रूपमा अहिले म आफ्ना जीवन भोगाइहरू विभिन्न स्कुल, अस्पताल र संस्थाहरू गएर बाँड्छु ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) को सद्भावना दूतका रूपमा मैले नेपालको महाभूकम्पमा परेका मान्छेले भोगेका असीम पीडा देखेकी छु । उनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन आफ्नो तहबाट सकेको सहयोग गरेकी छु । त्यसमा धेरै गर्न अझै पनि बाँकी नै छ ।
समाजसेवीका रूपमा म महिला अधिकारको वकालत गर्ने तथा महिला हिंसा, बेचबिखन र वेश्यावृत्तिविरुद्ध काम गर्ने संस्थासँग पनि क्रियाशील रूपमा संलग्न छु ।
मलाई मेरो हृदय ठूलो भएको र आत्मा उदार भएको भान हुन्छ । मेरो यो समय अब निकै घमाइलो भएको छ । ममा समाजलाई केही दिनुपर्छ भन्ने भाव उत्पन्न भएको छ ।
मलाई लाग्छ, क्यान्सर मेरो जीवनमा एउटा उपहारको रूपमा आयो । मेरा हेराइ तीक्ष्ण भए, मेरा सोच सफा भए, मेरो दृष्टिकोण पुनर्जागृत भए । मैले मेरा आक्रोश र तनावहरूलाई शान्त भावमा परिवर्तन गर्न सफल भएँ । तर, याद राख्नुस्, म अझै पनि मानिस नै हुँ ! त्यसैले कहीलेकाहीं त नचाहे पनि बाहिर आइहाल्छ । यसको मतलब मैले यसमा अझै काम गर्नु छ । तर, म अब वास्तवमै पहिलाभन्दा राम्रो व्यक्ति हुँ– दयालु, उदार र सच्चा ।
म भित्रैबाट परिवर्तित भएकी हुँ । र त्यहीअनुसार मेरो संसार पनि परिवर्तन भएको छ ।
मलाई फिल्म क्षेत्रमा पुन: प्रवेश गर्दाको डर लागेको सम्झिन्छु । ‘के मलाई दर्शकहरूले स्विकार्लान् त ? उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया देलान् ?
त्यही बेला मैले दाइसाकु इकेदाका प्रेरणादायी शब्दहरू पढें, ‘जीवन बयान नै गर्न नसकिने सम्भावनाहरूले भरिएको छ... त्यसैले हामीले कहिले पनि कसैलाई नकार्नु हुँदैन । विशेषत: हामीले आफ्नै सम्भावनाहरूलाई पनि सीमामा बाँध्नु हुँदैन । धेरैजसो अवस्थामा हामीले तोकेका हाम्रा सीमाहरू आफ्नै निर्णयका उपज मात्रै हुन् ।’
हिरोइन भएर फिल्म खेल्ने बानी परेको मलाई सुरुमा त सहअभिनयकर्ताको रोललाई सहजताका साथ स्विकार्नै गाह्रो भयो । त्यसपछि मैले त्यसमा आशीर्वाद देखें । म अब आफ्नो भावनामा डुबेर जटिल र गहिरो भाव तथा हरेक पात्रहरूलाई पूर्णरूपमा न्याय गर्न सक्छु ।
फिल्ममा मेरो दोस्रो अध्याय हिच्किचाउँदै कन्नड फिल्मबाट सुरु भयो । त्यसपछि २०१७ मलाई डार्क फिल्म ‘डियर माया’ मा अभिनय गर्ने अफर आयो । त्यसमा मैल अत्यन्त क्रूर भाव भएकी एक वृद्ध महिला पात्रको रूपमा अभिनय गर्नुपर्ने थियो । मेरा आफ्ना जीवनका नकारात्मक भोगाइहरूको कल्पना गर्दै मैले कहिल्यै नगरेको अभिनय गरें । के मैले मलाई क्यान्सर रहेको पत्ता लाग्नुपूर्व पनि त्यस्तो अभिनय गर्न सक्थें होला त ? हुन सक्छ π के थाहा ?
म अहिले कुनै पनि फिल्ममा सोच्दै नसोची अनुबन्ध हुन्न । उक्त फिल्म उद्देश्यमूलक र फरक छ भने मात्रै त्यसमा सामेल हुन्छु ।
डिसेम्बर, २०१६ मा कास्टिङ डाइरेक्टर मुकेश छबारियाले मलाई काठमाडौं बोलाउनुभयो र, राजु सर (हिरानी) ले आफ्नो जमानाकी नामुद अभिनेत्री नर्गिसको रोल गर्न अफर गरेको बताउनुभयो । नर्गिसको ५१ वर्षको उमेरमैं पित्तथैलीको क्यान्सरका कारण निधन भएको थियो ।
‘हुन्न !’ म भित्रैबाट झस्किएँ ।
‘यो अफरका हरेक कुरा डर लाग्दा छन् । म कसरी क्यान्सरको बिरामी भएर अभिनय गरूँ ? म कसरी ती डरहरू पुन: सहन सक्छु ? म कसरी प्रतिभावान नर्गिसजीको नक्कल गर्न सक्छु ? म रनवीर कपुरको आमा बनेर कसरी खेल्न सक्छु ? उनी त मभन्दा केवल दस वर्ष त कान्छो होलान् ?’
म अनिर्णीत अवस्थामै दस दिनपछि मुम्बई पुगें र राजु सरलाई सेटमै गएर भेटें ।
उनीसँगको त्यो भेटले मलाई निकै न्यानो महसुस गरायो । मलाई त्यहाँ न्यानो माया र उत्साहका साथ स्वागत गरियो । मसँग निकै सकारात्मक वातावरणमा साक्षात्कार भयो । फिल्म सेट खुुसी र समूहभावले भरिपूर्ण थियो ।
त्यसैले त राजु हिरानीका फिल्महरूले पर्दामा राम्रो र न्यानो भावनालाई सुन्दर ढंगमा समेटेको हुन्छ । यी भावनाहरू उनले सुटिङका बेला बीजारोपण गरेका वातावरणबाट नै उत्पन्न भएका हुन् ।
म अनायासै, राजु सरको अगाडि गएँ र मुस्कुराउँदै फिल्म खेल्ने जानकारी दिन पुगें ।
राजु सरसँग काम गर्दा, इम्तियाजसँग जिस्किँदा र अद्भुत प्रतिभाले भरिपूर्ण मायालु रनवीरसँग गफिँदा मैले हाम्रो समयभन्दा फिल्ममा कति परिवर्तन आएछ भन्ने थाहा पाएँ । अब त फिल्म क्षेत्र कति धेरै खुला, मित्रवत्, न्यानो र सुरक्षित भएछ । कस्तो राम्रो कथा, प्रतिभावान निर्माण टोली र उत्कृष्ट उत्पादन ।
यसको जगमा मौलिक, अनुपम कार्यको जन्म हुन्छ । यही कारणले गर्दा पनि फिल्ममा अहिले विभिन्न प्रकारका प्रयोग तथा विविधता रहेको देखिन्छ ।
छोटोमा भन्दा, मलाई यो नयाँ ‘फिल्म घर’ प्यारो लाग्छ र यसको सामीप्य रहिरहन मन छ । मलाई लाग्छ मैले ममा रहेको प्रतिभाको एक अंश मात्रै देखाउन सकेकी छु । साँचो अर्थमा त अझै धेरै त मभित्रै लुकेर बसेको छ, त्यसलाई निकाल्न बाँकी नै छ ।
अब मेरा आवश्यकताहरू भिन्न छन् । नयाँ म केवल सामान्य अस्तित्वमा सन्तुष्ट हुँदैन । म आत्मालाई न्यानो महसुस गराउने अपूर्व अनुभव गर्न चाहन्छु । मेरा शरीरका हरेक कोषहरू खुसीले नाच्ने काम गर्न चाहन्छु । म अगाडि बढिरहनुपर्छ । मैले बल्ल जीवनलाई अँगालेकी छु र जीवनले पनि मलाई अँगालेको छ ।
(पोखरामा यो साता जारी आईएमई लिट्रेचर फेस्टिभलमा विमोचन हुन लागेको अभिनेतृ मनीषा कोइरालाकृत ‘हिल्ड’ पुस्तकको अंश । ‘हिल्ड’ को नेपाली अनुवाद अधिकार प्राप्त गरेको फाइनप्रिन्टको स्वीकृतिमा स्वरूप आचार्यले यो भावानुवाद गरेका हुन् ।)
प्रकाशित : पुस ७, २०७५ ०९:१६